Google Chrome chọrọ iwepụ njikwa na kuki na data saịtị | Site na Linux
Ọchịchịrị | 09/09/2021 19:06 | Emelitere ka 10/09/2021 00:09 | Noticias
Onye injinia software kwuru nke a Chrome na -eme atụmatụ iwepu ibe ntọala "Chrome: // ntọala / saịtịData", ebe ịgagharịr na -ejikwa data webụsaịtị, nke na -enye onye ọrụ ahụ ikike ịchịkwa nzuzo ha.
Na ntọala Chrome, Google na -enye akwụkwọ ugbu a "chrome: // settings / siteData" nke na -enye ohere ịnweta data saịtị ka ihichapụ ha ma ọ bụ gbanwee ikike ndabara enyere webụsaịtị.
Ọ na -enye njikwa ike dị ukwuu na kuki na data saịtị, mana n'oge na -adịghị anya, a ga -ewepụ ya maka "chrome: // ntọala / ọdịnaya / niile", nke na -enye njikwa dị ole na ole.
Mgbe nchọta ahụ gachara, etinyere akụkọ ahụhụ na njikwa nsogbu Chromium. Kemgbe ahụ, ụfọdụ ndị otu Chromium agbaala mbọ chọpụta ihe kpatara njehie ahụ, ọ dị ka ọ nweghị isi.
Otu ọnwa gara aga, agbabara m na ahụhụ Google Chrome nke gbara ọchịchịrị na macOS nke mere ka ibe "kuki niile na data saịtị" dị na ntọala Chrome (chrome: // settings / siteData) jiri nwayọ nwayọ. Ị nwere ike ịlele ibe a site na imepe Mmasị, na -ahọpụta "Nzuzo na nchekwa", "kuki na data saịtị ndị ọzọ" wee "Hụ kuki niile na data saịtị." Etinyere m ihe nrụpụta Chromium ka m nye akụkọ ahụhụ. Kemgbe ahụ, ụfọdụ ndị otu Chromium na -anwa ịchọpụta ihe kpatara njehie ahụ, usoro nkịtị na -agwụ ike. Agbanyeghị, n'izu a enwetara m mmelite na isiokwu ahụ tụrụ m n'anya.
Otú ọ dị, onye nrụpụta kwuru na ọ nwetara mmelite n'izu gara aga na isiokwu ahụ tụrụ ya n'anya, dịka ọdịnaya azịza ya na -agụ:
"Anyị na -eme atụmatụ iwepu ibe a wee mee 'chrome: // ntọala / ọdịnaya niile' ebe a ga -ejikwa nchekwa."
O siri ike ikpebi ebumnuche Google maka mgbanwe a. O dochaghị anya ma ọ bụrụ na Chrome na -ehichapụ data saịtị niile mgbe a pịa bọtịnụ "Kpochapụ data".
Kemgbe a ọ bụ ụdị nchegbu Mozilla na -achọ izere site n'iwebata usoro ka mma iji hichapụ kuki na Firefox 91. Njirimara a na -enye ohere ihichapụ kuki na saịtị niile. Emebere ya iji gbochie nsuso ọ bụghị naanị site na webụsaịtị, kamakwa ndị ọzọ nke koodu ya na -egosi na saịtị ahụ, gụnyere ndị mgbasa ozi na ụlọ ọrụ nsuso.
Enwere ike iji nke a zoo njirimara onye ọrụ nke saịtị site na iwepu data niile enwere ike ịnweta. Na mgbakwunye, enwere ike iji ya hichapụ akara niile nke nleta na saịtị site na akụkọ nchọgharị.
Atụmatụ Google yiri ka ọ dị iche na nke Mozilla. Dị ka onye nrụpụta si kwuo, mkpebi a Google mere abughi isiokwu nke arụmụka ọhaneze ọ bụla.
Ọ sịrị, "Dị ka m maara, ekwuputaghị mgbanwe a n'ihu ọha, ndị ọrụ Google nwere ike kpughere ozi ahụ na akụkọ ahụhụ m na -adịghị emerụ ahụ.".
Ọzọkwa, onye nrụpụta ahụla na mgbanwe a adịghị atọ ụtọ.
“Ọ na -anapụ onye ọrụ ọtụtụ ozi na njikwa. Maka abamuru dị a ?aa? Enwere m olile anya ịmalite arụmụka ọhaneze na nke a wee mee ka Google kwụsịtụ tupu ọ 'gafee oke' na mgbanwe a na Chrome, "ka o kwuru. Site n'ụzọ, tupu mmadụ amalite iti mkpu 'Gbanwee na Safari' ma ọ bụ ihe yiri ya, buru n'uche na Safari nọ n'ọnọdụ ka njọ na enweghị ozi zuru oke gbasara ya. Kuki na saịtị, "ka ọ gbakwụnyere. .
Ọ na -ekwukwa na Apple na -ewerekarị ịzobe iwu na ozi dị mkpa n'aka ndị ọrụ. Maka nke a, onye injinia weere na ọ bụ ihe nwute na Google bu n'obi ịgbaso ụzọ a.
Agbanyeghị, nkwupụta ndị ọzọ kwenyere na Safari nwere ibe ewepụtara maka ijikwa na ihichapụ kuki, n'agbanyeghị na ọ nwere oke.
"Na Safari, ị nwere ike ịhụ ndepụta saịtị niile echekwara data na Mmasị> Nzuzo> Jikwaa data saịtị (enweghị nhọrọ ngosi ebe a, hichapụ ha)",
Finalmente ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike lelee nkọwa dị na post mbụ na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Google Chrome chọrọ iwepụ njikwa na kuki na data saịtị
Ihe siri ike na nke kacha njọ bụ na ha na -enye ngwaahịa mara mma ...
Echere m na ọ metụtara usoro ọrụ nke weebụsaịtị n'ozuzu ya, ọ bụrụ na mmadụ gbanwee kuki wee tinye ihe na -adịghị ahụkebe, webụsaịtị nwere ike were ya dị ka inwale enyo enyo.